चीनमा अंग्रेजी साइनबोर्डहरू सुधार्ने अभियान जारी
काठमाडौं — चीनमा राखिएका साइनबोर्डहरूमा अंग्रेजीको गलत अनुवादमा सुधार ल्याउनका लागि बेइजिङमा ठूलो अभियान चलाइएको छ ।
अनुवादमा गल्ती पनि निकै हाँसउठ्ने खालका हुने गरेका छन् । जस्तै, ट्वाइलेटको साइनबोर्डमा चिप्लिनुस्, तर ध्यानपूर्वक लेखिएको पाइन्छ जबकि त्यसको वास्तविक अर्थ हुन्छ भुइँ चिप्लो छ, ध्यान दिनुस् ।
यो अभियान सन् २०२२ को शीतकालीन ओलम्पिकभन्दा अघि विदेशीहरूलाई लक्षित गरी चलाइएको हो ।
सन् २००८ मा ओलम्पिकका लागि बेइजिङ शहरलाई तयार पार्दा चिनियाँ संकेतहरूको गलत अंग्रेजी अनुवाद भेटिएका थिए । त्यसपछि जनजागरुकताको सहायताले अनेकौं आधिकारिक संकेतमा भएका गलत अनुवादलाई हटाइएको छ ।
सन् २०१७ को डिसेम्बर १ बाट सरकारी सेवामा अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रिय मानकको प्रभावमा परे । चिनियाँ अनुवादक संघका कार्यकारी अधिकारी चेन मिङमिङले सार्वजनिक स्थानमा राखिएका अनुवादले विदेशीहरूलाई सजिलो हुने र
शहरको छवि निर्धारण गर्ने बताए ।
नासाले भेट्यो ध्यानमग्न योगी पिण्ड, पानीको प्रमाण पनि भेट्यो
भारतमा एक्जिट पोलको परिणामलाई विपक्षीले गर्‍यो खारेज
रमजानमा खानेकुरा महंगो भएर रुँदैछन् पाकिस्तानीहरू, स्याउ किलोको ६४० रुपैयाँ
मोदी सत्तामा फर्किंदा चीन खुशी, कारण यस्तो
ब्राजिलको एक बारमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु
विमानबाट आगोको झिल्का आएपछि आकस्मिक अवतरण, सबै १७० यात्रु सुरक्षित
नेकपाका वरिष्ठ नेता खनाल भन्छन् : 'प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा कटौती हुन्न' काठमाडौँ - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा कटौती नहुने बताएका छन् । प्रेस सङ्गठत झापाले सोमवार बिर्तामोडमा आयोज...
[फरक मत] बजेटमा वृद्धभत्ता : गरीबबाट उठाएको पैसा धनीलाई बाँड्ने कार्यक्रम !
कांग्रेसमा छायाँ सरकारका पदाधिकारी : न भत्ता, न गाडी !
नयाँ बसपार्कबाट ९ जुवाडे पक्राउ
तरकारीको मूल्य बढ्यो